Maxaa ka jira in Mukhtaar Roobow muddo 3 maalin ah aan cunin cunto - Awdinle Online
Maxaa ka jira in Mukhtaar Roobow muddo 3 maalin ah aan cunin cunto
January 2, 2020 (Awdinle Online) –Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa muddo saddex maalmood ah ka sooman cuntada, sida ay sheegeen ehelladiisa iyo xuno ku dhow.
Cunto ka soomidda Roobow ayaa waxaa Awdinle Online u sheegay xubno ka tirsan Xisbiga Amniga iyo Cadaaladda oo ee hoggaamiyo Abuu Mansuur.
Sidoo kale, Nuunow Maxamed oo ka mid ah ehellada Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho u sheegay in maanta ku seddax uu wadaadku ka sooman yahay cuntada.
“Sababta ma garan karno naloomana ogola inaan aragno balse waxaa nagula war geliyey in maalintii saddaxaad uu cuntada ka sooman yahay Sheekh Mukhtaar”. Ayuu yiri Nuunow.
Nunow oo ka mid ah ehelada Mukhtaar oo sidoo kale la weydiiyey halka uu Roobow hadda ku xiran yahay ayaa “Ninkaas Farmaajo ayuu u afduuban yahay waxaana maqalnay inuu ku xiran yahay guri ku dhexyaala madaxtooyada”.
Xubno ka tirsan Villa Somalia oo Awdinle Online ay xiriir la sameysay way beeniyeen in Roobow uu cuntada ka soomay.
Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay, haddana waxaa la rumeysan yahay inay salka ku heyso fashil ku yimid isku day lagu doonayey in lagu sii daayo oo ay wadeen musharixiintii is-badal doonka ahaa ee doorashadii Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan IGAD oo ku sugan Muqdisho.
Musharixiintii isbadal doonka ahaa ee u tanaasulay Mukhtaar Roobow waqtigii doorashada Koonfur Galbeed ayaa u tagay Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal, waxaana loo diiday inay la kulmaan Roobow.
Sida ay shegeeen xubno ka tirsan xisbiga Roobow, xubnaha IGAD ka socdo ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan dhammaan diyada dadkii lagu laayey Baydhabo waqtigii lasoo xirayey Roobow, waxaana madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen si hordhac ah loogu wareejiyey diyada illaa 4 qof oo kamid ah dadkii lagu laayey Baydhabo.
Balse arrintaas ayaa waxaa ka hor-yimid beesha Roobow, musharixiintii Isbadalka doonka iyo xisbiga Amni iyo Cadaalad oo doonayeyin marka hore lasoo daayo Roobow, kadibna si wadajir ah looga shaqeeyo bixinta diyada dadkii ku dhintay banaan-baxyadii ka dhacay Baydhabo ee looga soo horjeeday xariga Roobow.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysatay inaan lasii deyneyn Mukhtaar Roobow balse ay xubnaha IGAD kala shaqeeneyso bixinta diyada dadkii la laayey, taasoo keentay inuu cuntada ka soomo Roomow muddo saddex maalin ah, sida loo sheegay
Previous articleSidee lagu heli karaa Ka Hortag haydhacdo Masiibo Kedis ah?
Next articleTurkish Parliament Approves Military Deployment to Libya
Ciidanka DANAB oo degaano kala wareegay Al-Shabaab
Shabaab oo weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya
RW Rooble oo la kulmay Guddi ka Shaqeeya Arrimaha Dhaqaalaha
Galmudug oo lacag u balan qaaday dadkii ku hanti beelay….
Amiir Cusub oo loo dhaariyay dalka Kuwait
Itoobiya oo la siiyay Gaadiid ay u adeegsato la dagaalanka Shabaab
DANAB oo sheegtay in howlgal ku dishay Sarkaal katirsan Al-Shabaab
Maxaa looga hadlay kulankii Madaxweyne Farmaao & Madaxda Dowlad Goboleedyada?
Dab ka kacay goobo Ganacsi oo ku yaalla Dhuusamareeb